लामो दूरीमा दुई चालकको व्यवस्थालाई कडाइ गरिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > लामो दूरीमा दुई चालकको व्यवस्थालाई कडाइ गरिने
काठमाडौँ । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको दुर्घटना बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले दुई चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै प्रस्थानविन्दुबाट २५० किमी वा सोभन्दा बढी दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा दुई चालक नराखेको पाइए कारवाही गर्ने जनाएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक छरछ घण्टामा पालैपालो सवारी चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइए सम्बन्धित यातायात धनीविरुद्ध कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । गत शुक्रबारमात्रै सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडाँै आउँदै गरेको रात्रि बस पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटमा त्रिशूली नदीमा खस्दा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही दुर्घटनामा परी एक बालकसहित २० बेपत्ता भएका थिए । -रासस
२०७६ साउन २८ गते ११:२६ मा प्रकाशित
बोलबममा चढाएको भेटी
किन दिएन अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिसा ?
तातोपानी नाका बन्द, पुनः सञ्चालन हुन १० दिन लाग्ने
दुर्घटनामा परेर कांग्रेस नेताको निधन !
जलविद्युतमा सामुदायिक विद्यालयको लगानी
सहकारी एकीकरण कार्य शुरु : एक आपासमा गाभिए यी सहकारी
४८ लाख कित्ता सेयर थपिएपछि भयो ५ अर्ब २८ करोडको कारोबार !